» म राजिनामा दिन्न! “न त प्रधानमन्त्री बाट दिन्छु न अध्यक्ष बाट, म छोड्दै छोड्दिन,” – प्रधानमन्त्री केपि ओलि म राजिनामा दिन्न! “न त प्रधानमन्त्री बाट दिन्छु न अध्यक्ष बाट, म छोड्दै छोड्दिन,” – प्रधानमन्त्री केपि ओलि – हाम्रो खबर
म राजिनामा दिन्न! “न त प्रधानमन्त्री बाट दिन्छु न अध्यक्ष बाट, म छोड्दै छोड्दिन,” – प्रधानमन्त्री केपि ओलि
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले दुवै पदबाट राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन्।
शनिबार बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्री र महाधिवेशनअघि अध्यक्ष नछोड्ने दोहोर्याएका हुन्।
‘म राजीनामा दिन्नँ, न अध्यक्षबाट दिन्छु, न प्रधानमन्त्रीबाट दिन्छु। म छोड्दै छोडदिनँ। कुनै हालतमा छोड्दिनँ भन्ने उहाँको भनाइ थियो,’ एक सचिवालय सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही हुने हो। तपाईंले यताउति भनेर हुन्छ। पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही मान्ने हो भनेर हामीले भन्यौं।’
सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि आरोपपत्र राखिएको भन्दै आक्रोश समेत पोखेका थिए। स्थायी कमिटी बैठक राख्ने विषयमा आफ्नो असहमति रहेको भन्दै कुनै हालतमा बैठक नहुने चेतावनी समेत उनले दिएका थिए।
अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओली बैठकका लागि तयार भएको ती सचिवालय सदस्यको दाबी छ। तर प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भने स्थायी कमिटी बैठकका लागि प्रधानमन्त्रीको सहमति नरहेको दाबी गरेको छ।
‘कमरेड ओलीले स्थायी कमिटी बैठकका लागि म तयार छैन, बैठकको तयारी भएको छैन, सहमतिको प्रस्ताव लिएर जानुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो निकै बेरसम्म। मलाई आरोपको पुलिन्दा लगाउने भनेर समेत उहाँले भन्नुभयो,’ अर्का सचिवालय सदस्यले भने, ‘उहाँ (प्रचण्ड) ले आरोपको पुलिन्दा लगाएको भए तपाईंले प्रत्यारोपको पुलिन्दा पनि लगाउनुभएको छ भनेर भन्यौं। तर पनि बैठक नगरौं भन्ने नै उहाँको अडान थियो। अन्यमा सहमतिमै पूर्वनिर्धारित बैठक तोकिएकै समयमा गर्ने निर्णय भएको हो।’
स्थायी कमिटी बैठक बालुवाटार या धुम्बाराहीमा गर्ने भन्ने समेत निकैबेर छलफल भएको थियो । अन्त्यमा धुम्बाराहीमै बैठक गर्ने सहमति भएको ती सचिवालय सदस्यले बताए।
स्थायी कमिटी बैठक सुरू गरेर स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई प्रस्ताव र पत्र बाँड्ने अनि फेरि सहमतिका लागि छलफल गर्न सकिने समेत सचिवालय सदस्यहरूको धारणा थियो।
रामबहादुर थापा ‘बादल’को प्रस्ताव अस्वीकृत
सचिवालयमा पेश भएका पत्र र प्रस्तावबारे निर्णय लिन कार्यदल बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले गरेका थिए।
उनको प्रस्तावलाई समर्थन जनाउँदै प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई संयोजक बन्न भनेका थिए।ओलीको प्रस्तावलाई गौतमले अस्वीकार गरेका थिए भने बहुमत सचिवालय सदस्यले समेत त्यसलाई अस्वीकार गरे।
‘बादलको प्रस्ताव आएको थियो। तर त्यो प्रस्तावको के अर्थ भयो र!’ एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘हामीले त्यसलाई महत्व दिएनौं। दिने खालको पनि थिएन।’